Fivoriambe Global Voices 2008 · Global Voices teny Malagasy
Fivoriambe Global Voices 2008
Voadika ny 17 Marsa 2008 15:39 GMT
Faly mampandre ny hisian'ny Fivoriana Global Voices Olon-tsotra Mamita Vaovao 2008 ny Global Voices sy Global Voices Advocacy, ho atao any Budapest, Ongaria ny 27-28 Jiona 2008, miaraka amin'ny fanampian'ny McCormick Tribune Foundation, Berkman Center for Internet and Society ary MediaHungaria.
Ity fihetsiketsehana ity dia hampivory ny mpikambana ao amin'ny tetikasa Global Voices citizen media ary ny mpikambana ampielezan'ny mpitoraka bilaogy, mpihetsiketsika, teknolojista ary mpanao gazety, olona hafa eran-tany, mba hidinika mandritry ny roa andro momba ny “Famitam-baovaon'ny Olona tsotra ary ny Maha-Olontsotra”.
Sary avy tamin'ny Fivoriambe Global Voices 2006 izay natao tany Delhi, India
Ny Fivoriambe Global Voices dia mamela antsika mizara fahaizana anatin'ny fikambanana mieran-tanin'ny mpitoraka blaogy, mpihetsiketsika, mpianatra ary mpiasa amin'ny fampielezam-baovao. Ity fivoriana ity dia handinika ny fivelaran'ny famitam-baovaon'ny olona tsotra tarihan'ny olona ivelan'ny Amerika Avaratra sy Eoropa Andrefana, ary hamakafaka ny fanovana sosialy ataon'ny olona mpampiely vaovao mitombo an'isa eran-tany.
Ny andro voalohan'ny Fivoriambe, ho tontosain'ny Global Voices Advocacy, dia hatokana ho an'ny fiadian-kevitra momba ny fanampenam-bava sy ny olana misy amin'ny fahalalahana ara-teny eo amin'ny Internet. Ny andro faharoa kosa dia ampiseho fampisehoana Web2.0 amin'ny fampielezan-kevitra politika amin'ny demokrasia vao misondrotra ; olana amin'ny fandikana teny ary ny fiheverana fa ny internet dia toerana tokony ho bahanan'ny teny maro; hampiseho valitenin'ny fampitana vaovao vitan'ny olon-tsotra amin'ny toe-javatra mahamaika. Ny programa roa andro koa dia hisy fampianarana famoronana fomba fihetsiketsehana miaraka amin'ny Google maps, Twitter ary fizarana horonantsara maimaimpoana eto amin'ny Internet.
Misy programa fohy amin'ny faran'ity lahatsoratra ity. Hisy pejy internet momba ny famandrihana sy programa afaka roa herinandro eo ho eo, fa kosa dia aza misalasala mandefa imailaka amiko ato amin'ny georgiap@globalvoicesonline.org raha misy fanontaniana hafa sy fangatahana fiantohana.
Ataovy amin'ny kalandrie anareo ny Fivoriambe Global Voices Citizen Media. Manantena ny hahita anareo any Budapest !
Global Voices Citizen Media Summit 2008
Budapest, Hungary – 27-28 Jiona 2008
27 Jiona 2008
Fidirana 1: “Tambajotra iraisam-pirenena miady amin'ny fanampenam-bava”
Maninona no mila Tambajotra iraisam-pirenena miady amin'ny fanampenam-bava? Ahoana no fanamorana ny fizarana teknika, fomba fanao ary traikefa momba ny fiarovana ny fahalalahana miteny eto amin'ny internet ?
Fidirana 2: “Filazam-baovaon'ny Olon-tsotra ary Fahalalahana Miteny eto amin'ny Internet”
Miatrika ny fitandrohan'ny fitambenam-bava sy fanindriana hazo lena ny fampitana vaovaon'ny olona tsotra. Ohatra avy any Kenya, Burma, Egypta ary Hong Kong.
Fidirana 3: “Fiarahana miana amin'ny fanampenam-bava”
Mizara ny traikefany ny mpandray anjara miaina any amin'ny tany misy fitampenam-bava ary milaza ny ezaka ataony hiadiana amin'izany.
Fidirana 4: “Mpihetsiketsika sy ny Akademia : Fitaovana sy Hay”
Misy ny fitaovana fampiasa hialana amin'ny masontsivan'ny internet sy fomba hafa fanampenam-bava, fa kosa tsy tonga amin'ny olona mila azy izy ireo na dia tokony aza. Ahoana no fomba hanamorana ny fifanamboarana eo amin'ny mpanamboatra ireny fitaovana irey sy ny fihetsiketsehana miady amin'ny fanampenam-bava mila azy ireny ? Ary ahoana no fanamorana ny fifandraisana eo amin'ny mpihetsiketsika sy ny mpanamboatra ka afaka hanamboaran'ireo fitaovana mifanojo ny mpihetsiketsika kokoa ?
Fidirana 5: “Ny Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny mpihetsiketsika eny an-toerana : eo am-piarovana ny feo”
Ahoana no fomba hiasan'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana miaraka mpihetsiketsika eny an-toerana mba hiadiany amin'ny fomba mailaka kokoa amin'ny fanampenam-bava?
28 Jiona 2008
Fidirana 1: “Miely eran-tany ny Web 2.0”
Ny fisehon'ny internet faharoa dia mihoatra nohony tagging sosialy, RSS ary trackbacks. Noho ny fielezan'ny broadband eran'ny tany an-dalam-pandrosoana sy ny fivoaran'ny mpandraharahan'ny internet eran-tany dia betsaka ankehitriny ny fanamboarana internet mitranga any amin'ny toerana tsy nisy internet akory vao folo taona lasa izay. Ity fivoriana ity dia ho an'ny mpitarika ny fanamboarana Web 2.0 avy any Bolivia, Botswana, Colombia ary Repoblika Demokratikan'ny Kongo.
Fidirana 2: “Ny mpifidy manana internet any amin'ny tany vao isondrotan'ny demokrasia”
Toa afaka mandray anjara kokoa amin'ny fomba fifidianana demokratika ny blogging, fitaovana fampifandraisana sosialy eto amin'ny internet toa an'i Facebook, Twitter, ny fizarana sary sy horonantsary toa an'ny YouTube, Flickr ary ny fielezan'ny teknolozia mobile eo anivon'ny olontsotra.
Ity fidirana ity dia handinika ny fiatraikan'ireo amin'ny fifidianana tany Kenya, Armenia, Iran ary hametraka ny fanontaniana : misy fiatraikany amin'ny demokrasia vao miakatra ve ny fampielezam-baovao ataon'ny olon-tsotra?
Fidirana 3: Fianarana Fihetsiketsehana Dizitaly
Vonona ve ianao amin'ny fahamehana manaraka amin'ny bontolon'ny blaogy? Amin'ity fidirana ity dia hivondrona isika mba hianatra miaraka amin'ny mpihetsiketsika efa nampiasa ireto fitaovana ireto ho Mashups toa ilay Access Denied mpa, mampiseho hoe aiza no misy fanampenam-bava ny takelaka Web 2.0, Ushahidi.com, fampisehoana ny hery setra tao aorian'ny fifidianana tany Kenya, sy fizarana vaovao momba ny fahamehana amin'ny alalan'ny SMS ary Twitter.
Vondrona A) Google Maps mashups
Vondrona B) SMS sy flashmobbing
Vondrona C) Hetsiketsika ho an'ny mpitoraka blaogy voafonja
Vondrona D) Fizarana horonantsary
Vondrona E) Fizarana vaovao amin'ny blaogy madinika (microblogging)
Fidirana 4: “Fandikana teny sy ny Takelaka Web amin'ny teny maro”
Tao anatin'ny tantaran'ny fiseraserana eran-tany mampiasa , ny mpandinika, spesialista, mpitsikera fizaram-baovao, mpihetsiketsika sy mpanoratra dia nihevitra fa ny Internet dia toerana fifanakalozan-kevitra tsy misy fisakanana ho an'ny fizarana hay, hevitra sy vaovao eran-tany. Kanefa dia mbola voazaran'ny teny ihany anefa ireo fivondronan'olona ireo. Ny fizarazarana ara-teny ve dia olana teknika sa koltoraly ? Misy masinina mpandika toa an'ny google Translate ve afaka manantanteraka ny fanantenana fa ho Takelaka Web amin'ny teny maro izy ity, fa kosa tsy olona mpandika teny no manome fotoana sy aina hanamboarana tetezana hampitohy ny bolongana tsirairay ?
Fidirana 5: “Manavotra ny fampielezana vaovaon'ny olon-tsotra”
Rehefa misy korontana politika, matetika ny governemanta no mampangina ny gazety mahazatra amin'ny fomba ara-dalana, na amin'ny fampiorohoroana. Ny sisa tavela milaza ny tantara sy ny miseho dia olon-tsotra vavolom-belona, mizara sary sy tatitra eo amin'ny Internet. Amin'ity fidirana ity isika dia hamelabelatra ny fihantraikan'ny fampielezana vaovaon'ny olon-tsotra tamin'ny toe-javatra miaka toa ny tany Myanmar (Burma), Pakistan, Sina, teo an-toerana ary koa eran-tany.
Zarao: twitter facebook reddit
5 ora izayFahasalamàna
7 ora izayAzia Atsimo
Ny dindo navelan'ireo Portiogey tamin'ny hainahandro indiàna
Filma fohy mampiseho hoe ahoana izany mainty ao Japana
Ny dizitaly dia mety ho fantatry ny malagasy ihany koa amin’ny teny hoe niomerika raha ny fahalalako azy
19 Marsa 2008, 08:54
Misaotra Jentilisa an ! Tena mibabaka aho fa tsy hitako ny handikana azy teo io. Andraso ary fa amboarina.
Ankoatra izay inona no afaka handikana ilay “Citizen Media”?
20 Marsa 2008, 11:59
Betsaka ihany angamba tahaka ny hoe fantsom-baovaon’olompirenena ohatra na haino amanjerin’olom-pirenena.
20 Marsa 2008, 13:50
Hiresaka koa -> jentilisa
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, Español, Français, বাংলা, македонски, Português, English
Fanongotana sarivongana (tsangambato) : Frantsa miatrika ny lasany momba ny fanjanahana sy ny fanandevozany
“Redención” no sarimihetsika môzambikàna voalohany tafiditra tao anaty lisitra Netflix
Fantaro i Andriamifidisoa Ny Haja Zo, hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron'ny 7 – 13 Aogositra